DFS Oo Dacwad ka dhan ah Kenya u Gudbisey ICAO Kadib diyaaradii ka Degtey Magaalada Kismaayo – hareerley News
DFS Oo Dacwad ka dhan ah Kenya u Gudbisey ICAO Kadib diyaaradii ka Degtey Magaalada Kismaayo
Posted on October 5, 2019 October 5, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Dowladda Soomaaliya ayaa hay’adda duulimaadyada rayidka ah ee QM ee ICAO u gudbisay dacwad ka dhan ah dowladda Kenya kadib markii diyaarad kasoo duushay Nairobi ay maanta ka degtay magaalada Kismaayo.
Ilo-wareedyo ka tirsan wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Soomaaliya ayaa Warbaahinta u sheegay in dowladda ay waraaq ay u qortay hay’adda ICOA ku eedeysay dowladda Kenya ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee duulista hawada.
Ilo-wareedyo ka tirsan dowladda ayaa Caasimada Online u sheegay in nooca diyaaradda maanta tagtay Kismaayo ay tahay Fokker 50, oo lambarka diiwaankeedu yahay 5Y-JXJ, kana diiwaan gashan dalka Kenya, waxaana ay ku duuleysay shati ay leedahay shirkadda Jubba Airways.
Dowladda ayaa sidoo kale ay suurta-gal tahay inay tallaabo ka qaado shirkadda Jubba Airways.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey usoo saartay amar ay Kismaayo uga mamnuucday duulimaadyada aan soo marin magaalada Muqdisho, taasi oo diyaaraddii maanta tagtay Kismaayo ay jebisay.
Diyaaradan ayaa Jubaland ay ugu talo gashay inay kusoo daabusho madaxda loo diiday inay ka qeyb-galaan caleemo-saarka madaxweyne Axmed Madoobe.
Dacwada ay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada u gudbisay ICAO ayaa noqoneysa tii ugu horeysay oo ay ee ka dhan ah dowladda Kenya oo ay Soomaaliya u gudbiso Qarramada Midoobey.
Posted on November 9, 2019 November 9, 2019 Author Hareerley News
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dalalka Yurub ay walaac xoogle ka qabaan Bosnia iyo Herzegovina, kaas oo tilmaamay in Balkans-ka ay dib ugu soo noqotay dhibaatadii Jihaadiistayaasha. Madaxweynaha Bosnia Zeljko Komisic, ayaa sheegay inuu u yeedhi doono safiirka Faranskiiska u fadhiya Sarajevo si ay wax uga waydiiyaan hadalka ka soo yeedhay Madaxweynaha […]
(Daawo):-Hogaamiyaha Maamulka K/Galbeed Oo shaleyto shir Gudoomiyey Golaha Wasiiradada Maamulka k/Galbeed
Posted on October 18, 2019 October 18, 2019 Author Hareerley News
Hogaamiyaha Dowlad Goboleedka K/Galbeed Soomaaliya oo shir Gudoomiyay shirka Gollaha wasiirada K/Galbeed,oo looga hadlayay Arrimaha waxbarashada Iyo Amniga Deegaanada KGS. Halkaan hoose ka Daawo
Xeer Ilaaliyaha Qaranka Oo laamaha Garsoorka Puntland u furey Tababar
Xeer ilaaliyaha Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa maanta magaalada Garowe tababar uga furay laamaha garsoorka, laamaha Booliiska, xafiiska difaaca xuquuqda Aadanaha iyo qareenada madaxa bannaan, tababarkaan ayaa casharada la qaadanayo waxaa ka mid ah hab cusub oo ay dowladda federaalka u bixin doonto warqadda dhaawac muujinta ee Rifeertada . Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya […]
Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka oo wadahadallada dib u billaabaya